ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်း - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်ပေးနိုင်သလား။
၀ န်ထမ်း ၇၀% ကျော်သည်သူတို့၏အလုပ်ကို ၄ င်းတို့၏အလုပ်အားဖြင့်သတ်မှတ်သည်ကိုဝန်ခံကြသည်။ သို့တိုင်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသော့ဖွင့်ရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်၏အဓိကအချက်မှာ - ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများအထိဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်အင်ဂျင်နီယာများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ တန်ဖိုးကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေနဲ့အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့အချိန်ကုန်တာကိုရိုးရိုးလေးပဲရရှိနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာကဒီဟာကိုသုံးတဲ့လူနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအပြစ်မပေးသင့်ဘူး။ ၎င်းသည်သွက်လက်သောအဖွဲ့များကိုသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်ကိုထပ်မံသိရှိလာစေရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်စွမ်းရည်ရှိရမည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလိုအလျောက် - ပွင့်လင်းပြီးဆော့ဖ်ဝဲဗဟိုပြုစက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များ - သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
စက်မှုနည်းပညာဆိုင်ရာအယူအဆ။ စက်ရုံအလိုအလျောက်။ လုပ်ငန်း ၄.၀
တစ်ခုခုနှင့်သောပြောင်းလဲမှုကိုမမျှော်လင့်ဘဲကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများကအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သော်လည်းအပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအခြေခံမူများအပေါ် အခြေခံ၍ ခေတ်မီနည်းပညာများသည်စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချပြီးပစ္စည်းသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ နှစ်စဉ် CRA အရခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီး McKinsey ခန့်မှန်းချက်အရစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ထိရောက်မှုရှိသည့်သော့ကိုဖွင့်ရန်မရှိသေးပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးစားဒီဂျစ်တယ်ပူးပေါင်းမှုကိုပြောင်းလဲပြီးလက်ခံလိုက်မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။က။ စက်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကယနေ့ခေတ်ရဲ့ခေတ်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်စက်ပစ္စည်းလေ့လာခြင်း၊ တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်တိုးတက်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြားရသောအခါမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ လက်တွေ့တွင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ရောင်းချသူသော့ခတ်၊ ကန့်သတ်ချက်စက်နှင့်စက်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းပညာများကိုပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အလားတူအခက်အခဲများက၎င်းကိုရည်မှန်းချက်အသစ်သို့မရောက်ရှိစေခြင်းအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသောကာဗွန် - ကြားနေထုတ်လုပ်မှု၊ ရှေ့တန်းမှထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများမှတစ်ဆင့်အနာဂတ်သုညအနာဂတ်အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူးစက်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှပြန်လည်ထူထောင်ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့မည့်အစီအစဉ်များကို ဦး ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူရေး၏အဓိကမဏ္centralိုင်ဖြစ်ရန်ရွှေအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
frစုစည်းခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများအားလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်အခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ရန် (သို့) သူတို့၏ကာဗွန်ခြေရာကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်စဉ်ဆက်မပြတ်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတားဆီးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထုတ်လွှတ်မှု၏သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၂%) အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ status quo ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ရေရှည်တည်တံ့သောမော်ဒယ်များသို့မပြောင်းနိုင်ပါ။ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာအကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မည်၊ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးနှင့်အနာဂတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလိုအလျောက်စံသတ်မှတ်ထားသောချဉ်းကပ်နည်းသည်အဖြေဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ လက်ရှိ IEC61499 စံသည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဝဲလ်၏စံသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်းဤဘဝသက်တမ်းများသည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်သည်တိုးတက်မှုနှင့်အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှု။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်စမတ်ဖုန်းများသို့အချိန်နှင့်တပြေးညီ software update များကို download လုပ်ခြင်းသည်ဒုတိယသဘောသဘာဝဖြစ်လာသည်။ Tesla သည်၎င်း၏မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူချဉ်းကပ်မှုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အတွက်ပုံမှန်ရရှိနိုင်သည့် software update များရှိသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်ဒီအိပ်မက်ကိုစက်မှုစက်တွေလက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ စံသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းသည်အင်ဂျင်နီယာအချိန်ကိုသက်သာစေပြီးသူတို့၏ ဦး စားပေးများကိုပြinnovationနာဖြေရှင်းခြင်းမှဆန်းသစ်တီထွင်မှုသို့ပြန်လည်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများပိုမိုချွေတာရန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အားကာကွယ်နေစဉ်ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်၊
ဆော့ဖ်ဝဲကိုဗဟိုပြုသည့်တစ်လောကလုံးအလိုအလျောက်နည်းပညာအသစ်သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေပြီဖြစ်သည်။ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲဟာဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်ဂီယာလိုင်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့စီးဆင်းမှုလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်တာကပိုလွယ်ကူပြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားသောအခါ Universal Automation သည်ပျက်ကွက်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြissuesနာများကို ၄ ဆပိုမြန်စေသည်။ စားသုံးသူထုပ်ပိုးထားသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ စီးပွားရေး၊ အလုပ်သမားများနှင့်စားသုံးသူများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အမှားအယွင်းတွင်ထုတ်ကုန် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းလာသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန့်ကျင်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်စက်မှုစက်များသည်တစ် ဦး ချင်းအပေါ်ရှင်သန်မှုမရှိပါ။ အဲဒီအစားဆန့်ကျင်ဘက်။ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကပိုကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့၊ လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာသဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထိုအချိန်ကဝက်အူချည်များ၏စံချိန်စံညွှန်းဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုတော်လှန်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုံးစံထက်မည်သည့်စံဝက်အူကိုသုံးပြီးစက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးပြုပြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီကမ္ဘာကြီးအားမှီခိုလာသည့်စက်မှုစံချိန်စံညွှန်း၏ပထမဆုံးသောကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းမှုစနစ်များကိုစံသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုရရှိနိုင်မည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
Universal အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အင်ဂျင်နီယာများအားသူတို့၏စွမ်းရည်များကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရည်ရွယ်ချက်အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်စိမ်းလန်းသောပြန်လည်နာလန်ထူရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေဟဗေဒနှင့်တိုးတက်မှုတို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရောင်စဉ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံး၌မရှိတော့ကြောင်းသေချာစေရမည်။ တိုးတက်မှုအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းသည်စက်မှုဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများမှတဆင့်၎င်းနှင့်များစွာသောအရာများဖြစ်နိုင်သည်အလွယ်တကူ interoperable, စံစနစ်များ့။
2021-06-08 23:23:01 | ကြာရှည်ခံမှု...
Facebook ရှိမျှဝေရန် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်အာကာသထဲသို့ဝင်လာသည်။ ဓာတ်ပုံဆရာ: Matthew Staver / Bloomberg © 2016 Bloomberg Finance LPChers Billionaires, သင်၏အာကာသပြိုင်ပွဲအသစ် (၎င်းသည် Bezos သို့မဟုတ် Branson ဖြစ်လိမ့်မည်) မဟုတ်ဘဲသင်သည်အိမ်တွင်ရှိနိုင်သောအလားအလာရှ...
Mermade သည်ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာနေ့အတွက် ၁၀၀% အသိအမှတ်ပြုသမုဒ္ဒရာပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အမှိုက်များကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
2021-06-07 20:38:47 | ကြာရှည်ခံမှု...
Linkedin တွင် Facebook တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါဘယ်ဘက်မှညာသို့: MerMade ပူးတွဲတည်ထောင်သူများဖြစ်သော Matt Hartz၊ Jesse Blatz၊ Tessa Hayward နှင့် Matt LanzdorfMatt HartzMerMade သည်သမုဒ္ဒရာထုမှရေဂါလံ ၆၅ ဂါလန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအမှိုက်များဖြင့်ပင်လယ်ထဲမှထွက်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကော့စတာရီပတ် ၀ န်...
2021-05-16 14:43:20 | ကြာရှည်ခံမှု...
Linkedin တွင် Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်တင်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မွေးမြူထားသောတိရိစ္ဆာန်ပရိုတင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးရန်အသုံးပြုကြသည်ဟု Pet Sustainability Coalition. getty မှသိရသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသည်။...
2021-05-08 11:52:41 | ကြာရှည်ခံမှု...
FacebookShare တွင် Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ။ အကယ်၍ ကားဝါသနာရှင်များအကြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုးဆွနိုင်သည့်အကြောင်းအရာရှိပါကဂန္ထဝင်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်လည်ပတ်ရန်ပြောင်းလဲလိုက်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောလူများသည်လျှပ်စစ်ယာဉ်များကိုမုန်းတီးမှုမုန်းတီးနေပြီဖြစ်သော်လည်းနာမည်ကြီးမော်တော်ယာ...
အင်္ဂလန်တွင်ပေါင် ၂၇ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့်လမ်းဖောက်လုပ်မှုကိုအစိုးရလျှော့ချမည်
2021-05-07 11:18:40 | ကြာရှည်ခံမှု...
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ယူကေရှိ Coronavirus ပိတ်ဆို့နေစဉ်လမ်းဆုံ ၈ အမှတ်အသားအနီးရှိ M5 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ။ . . . [+] (Getty Images မှတစ်ဆင့် David Davies / PA Images မှဓာတ်ပုံ) ဓာတ်ပုံ Getty Images မှဓာတ်ပုံ coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ခရီးသွားအလေ့အကျင့်မျာ...
၂၀၂၂ ခုနှစ်ထုတ် Petit Larousse အဘိဓာန်ကိုရိုက်ထည့်ရန်စကားလုံးအသစ် ၁၇၀ တွင် coronapist
2021-05-06 15:54:14 | ကြာရှည်ခံမှု...
တွစ်တာတွင် Facebook တွင်မျှဝေပါ။ Linkedin ပေါ်ရှိပါရီပေါ်လီဗာပူးလ်ပေါ်ကရူဗီလီယမ်သံသရာလမ်းကြောင်းပါရီကော်လီနွန်ရိဒ် Coronaapiste - coronaapiste သည်ပြင်သစ်စကားလုံးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ထုတ် Le Petit Larousse ၏ Neologisms တစ်ခုဖြစ်သည်။ "coronavirus" နှင့် "cycleway" တို့၏အဘိဓာန်ကျုံ့မှုသည်ပြင်သစ်ဘာသာစကားစွယ်စ...
2021-05-05 13:47:04 | ကြာရှည်ခံမှု...
Linkedin တွင် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်ယူပါ။ ယူအက်စ် - 22ပြီ ၂၂ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီ ၂၂ ရက်ကြာသပတေးနေ့၊ ဝါရှင်တန်ရှိကြာသပတေးနေ့၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိပြည်ထောင်စုဘူတာရုံရှိကားဂိုဒေါင်တွင် EVgo အားသွင်းစက်တစ်ခုကိုပုံဖော်ထားသည်။ (Caroline Brehman / CQ- Roll Call မှဓာတ်ပုံ။ Nets Dolšak၊ Aseem P...
2021-05-05 08:15:53 | ကြာရှည်ခံမှု...
Linkedin ရှိ FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်လီသီယမ်၊ ကိုဘော့၊ ကြေးနီ၊ dysprosium, yttrium, . . . [+] terbium၊ ရွှေနှင့်ငွေကဲ့သို့သောဒြပ်စင် ၃၀ ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (Sean Gallup / Getty Images မှဓာတ်ပုံ။ ) Getty Images သမ္မတဘိုင်ဒန်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လမ်းကြောင်းမ...
2021-05-05 07:03:41 | ကြာရှည်ခံမှု...
တွစ်တာတွင် Facebook တွင်မျှဝေပါ Linkedin ရှိ TwitterShare တွင်မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၈၊ ဂျာမနီ၊ Bergheim Niederaussem - ကညွတ်ရိတ်သိမ်းလုပ်သားများ။ ဓာတ်ပုံ - Henning . . . [+] Kaiser / dpa (ဓာတ်ပုံ။ Henning Kaiser မှဓာတ်ပုံ / Getty Images မှဓာတ်ပုံမဟာမိတ်) Getty Images မှတဆင့်ဓာတ်ပုံမဟာမိတ်အဖွဲ့လယ်ယာမြေများသည်သစ...
ပဲလေးကကော်ဖီ၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ Sproud သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်ရုံအခြေပြုသောက်စရာစျေးကွက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်
2021-04-25 23:47:36 | ကြာရှည်ခံမှု...
Linkedin တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ဤ 1936 Essex ပဲကောက်ပဲသီးနှံများသည်တစ်နေ့နေ့တွင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုတောင်သူများကကူညီနိုင်မည်ဟုမထင်ခဲ့ကြပါ။ နှိမ့်ချသောအဝါရောင်ခွဲထွက်သည့်ပဲသည် ပဲပုပ်ဟင်းချိုတွင်အဓိကပါဝင်သောအချက်မှာဆွီဒင်အိမ်များတွင်ကက်သလစ်ခေတ် မှစ၍ ကြာသပတေးနေ့များ၌ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွင်ကယ်လ...
Volvo xc40 အားသွင်းအမွှာ Awd: ပထမတစ်ချက်
2021-04-24 13:43:13 | ကြာရှည်ခံမှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်မျှဝေပါအချို့ထုတ်လုပ်သူများ (အထူးသဖြင့် Volkswagen) သည်လူသုံးလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်းမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများသည်စျေးကွက်၏ဇိမ်ခံအပိုင်းကို ဦး တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီစျေးနှုန်းများကိုဆိုလိုနေဆဲဖြစ်သောကြေ...
Biden u.s. ထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ
2021-04-22 18:06:30 | ကြာရှည်ခံမှု...
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်ကယခုသီတင်းပတ်အတွင်းဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချမည်ဟုကတိပြုမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Forbes. com အရဤရည်မှန်းချက်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများ၏အဆိုအရရည်မှန်းချက်သည် ob နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှေ...
2021-04-19 04:15:16 | ကြာရှည်ခံမှု...
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်ပြားများ၊ ခေါက်ထားသည့်စက်ဘီးများသို့မဟုတ်ကားကလပ်အသင်းဝင်များအတွက်လဲလှယ်ရန်ပြင်သစ်သည်မကြာမီပင်စပျစ်သီးများကိုညစ်ညမ်းစေသောပိုင်ရှင်များအားယူရို ၂, ၅၀၀ (ဒေါ်လာ ၂, ၉၇၅) ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်သည်။...
Tertill သည် roomba တီထွင်သူများထံမှဥယျာဉ်နှင့်ပေါင်းသင်သည့်စက်ရုပ်ဖြစ်သည်
2021-04-18 19:35:49 | ကြာရှည်ခံမှု...
ဒီပစ္စည်းကို ၂၀၁၉ နွေ ဦး ရာသီလောက်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရောင်းအားတက်လာပြီးမကြာခင်မှာအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။...
ကူးစက်ရောဂါ ppe စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်မျက်နှာနှင့်ပတ်သက်သောအရာများအကြောင်း၎င်းအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း
2021-04-12 01:04:58 | ကြာရှည်ခံမှု...
Ocean Conservancy သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့ရှိကမ်းခြေများနှင့်ရေလမ်းကြောင်းများမှကာကွယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ ၁၀၇၀၀၀ ကျော်ကိုစုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။...